I-Apple Music Festival, isimemezelo se-Apple Watch Series 2, ukuhambisana kwe-MacOS Sierra, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki kuSoydeMac | Ngivela kwa-mac
I-Apple Music Festival, isimemezelo se-Apple Watch Series 2, ukuhambisana kwe-MacOS Sierra, nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto eSoydeMac
UPedro Rodas | | I-Apple Watch, eziningana
Ngelinye iSonto, abahleli bakaSoy de Mac bakulethela ukuhlanganiswa kwezindaba ezithandwa kakhulu emhlabeni we-apula elilumekile. Kube yisonto elixakekile ngandlela thile futhi ukuthi ukwethulwa kwe-macOS Sierra kulethe izinguquko eziningi ohlelweni lwamakhompiyutha lwe-Apple futhi kunabasebenzisi abaningi abenza leap kulolu hlelo olusha njengoba ngibhala le migqa.
Ngalesi sizathu, izindatshana eziningi ezishicilelwe kuleli sonto bezihlose ukusiza lezo zinkulungwane zabasebenzisi abasifundayo futhi kukhona ukuthuthuka okuthile kohlelo njengokuvumelanisa okuzenzakalelayo ne-iCloud yamafolda wedeskithophu namaDokhumenti abaletha okungaphezu kokukodwa noma omunye phansi kwendlela yomunyu.
Kodwa-ke, ngesonto eledlule siqale ngokumemezela lokho i-Apple Music Festival yaqala. U-Elton John ubephethe ukuvula i-10th Apple Music Festival, ngo-21: 30 ebusuku ngesikhathi saseSpain. Ubusuku obuningana bamakhonsathi buqale, obuzofinyelela umvuthwandaba ngomhla ka-30. Amakhonsathi i-Apple esinikeza wona kuwo wonke amadivayisi ayo, yize kuhlale kunconywa ukuwabuka ku-Apple TV ukuze sikwazi ukuwajabulela ngamandla amakhulu. Njengonyaka odlule nge Ellie Goulding, umdwebi waseBrithani ube nelungelo lokuvula lo mkhosi kusuka ku- ILondon Roundhouse.
Uzakwethu uJavier Porcar unikeze isibhamu sokuqala ngezihloko zosizo ze-MacOS Sierra entsha ephawula nge izici ezintsha zenziwe ku-Finder ofanayo. Eminyakeni edlule, abathuthukisi basebenzise ukungabi khona kwezinketho ukuletha emakethe i-"vitaminized" Finder ehlangabezana nokulindelwe ngabasebenzisi abakhulu ekuphathweni kwamafayela. Kuyiqiniso ukuthi uhlelo lwe-Apple lunesikhali esiyimfihlo, ukuqaliswa kwe I-Automator ukugcwalisa ukushiyeka okuningi kwe-Finder. Kepha kunoma yikuphi, ikakhulukazi kubasebenzisi abangaqeqeshiwe kangako noma abafuna kuphela izinketho eziyisisekelo, I-Apple inquma ukuletha izici ezintsha ku-Finder ku-MacOS Sierra.
Cishe ngemuva kweminyaka emibili kwethulwe ngokusemthethweni imodeli yokuqala ye-Apple Watch, inkampani eseCupertino yethule isizukulwane sesibili se-smartwatch yenkampani ngoSepthemba 7. Phakathi kwezinto ezintsha esizithola kulesi sizukulwane sesibili kukhona iprosesa entsha, isikrini esikhanyayo se-OLED, i-GPS eyakhelwe ngaphakathi kanye nokungangenwa ngamanzi, kuze kube ngamamitha angu-50 ukujula. Ukuze uyenze ingangeni manzi, ngaphandle kokuyivala ngokuphelele le divayisi, i-Apple iguqule isipikha esisetshenziswe kumodeli yokuqala yalena evala amanzi futhi futhi ikulungele ukumelana nengcindezi yamanzi. Lesi yisimemezelo sokuqala sale Apple Watch Series 2 entsha.
I-athikili ozoba nentshisekelo kuyo yileyo esixoxe ngayo ukuthi yimaphi amakhompyutha we-Apple ahambisana ne-MacOS Sierra entsha. Noma kunini lapho kuba khona ukuvuselelwa kohlelo olusebenzayo, noma ngabe kuyini, ukungabaza kuyasihlasela futhi lokhu kuyinto okungafanele yenzeke kithina okwamanje kodwa kuyenzeka kithina. Ngakho-ke siyakukhumbuza futhi ama-Mac ahambisana ne-MacOS Sierra 10.12.
Senza amabakaki amancane ukukukhombisa enye ye-unboxing yokuqala yama-AirPod amasha i-Apple eyethule ku-Keynote yokugcina. Kuze kube manje, bengingakwazi ukubona noma iyiphi ividiyo kunoma iyiphi indlela engekho egumbini lokuhlola le-Keynote ngoSepthemba 7, futhi yiyona vidiyo esiyethula kule ndatshana usikhombisa a i-unboxing yeyunithi yangempela yalezi headphones.
Sibhekene nohlelo olusha lokusebenza lwe-Apple lweMac futhi uma sesinalo ilandelwe kukhompyutha yethu Esikuncomayo ukufaka kusuka ekuqaleni ukuze ususe noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezisusiwe, amaphutha noma yini engalimaza umuzwa ngenguqulo entsha yohlelo. Iqiniso ukuthi lolu hlobo lwezibuyekezo ezibalulekile kuyelulekwa ukuthi uzenze kusukela ekuqaleni yize kungeyona imfuneko ebalulekile, okungukuthi, Uma ungafuni ukufaka iMacOS Sierra kusukela ekuqaleni, mane uyilande ku-Mac App Store bese uqhafaza ku-install. Ngaphambilini, sikweluleka futhi ukuthi wenze isipele uma kwenzeka okuthile kungahambi kahle, kepha empeleni ayinayo imfihlo engaphezu kwaleyo. Lapho-ke uma ufunda lokhu kungenxa yokuthi ufuna ukufaka iMacOS Sierra kusukela ekuqaleni ku-Mac yakho, ngakho-ke Ake sibone izinyathelo zokukwenza kusuka ku-USB ebhuthazayo.
Futhi sikuqedile ukuhlanganiswa kwethu ngezindaba ezikhuluma nge ukufakwa kwezicelo ezivela eceleni ku-MacOS Sierra. Njalo lapho i-Apple yethula uhlobo olusha lohlelo lwayo lokusebenza, ngaphezu kwezinto ezintsha zobuhle nezisebenzayo ukuze abasebenzisi bangalahlekelwa yintshisekelo kuzo, inkampani ihlala izama ukuqinisekisa ukuphepha kwethu. Futhi njengobufakazi balokhu sinezibuyekezo eziqhubekayo ezikhishwa njalo ukuze sikwazi ukuxazulula noma iyiphi inkinga yokuphepha edlule, yamanje noma yesikhathi esizayo. Kodwa futhi shintsha izinketho ezithile zohlelo lokusebenza ukuze ususe izinketho lapho ufaka noma wenza izinguquko ohlelweni. IMacOS Sierra itholakale ukulanda izinsuku ezimbalwa manje.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » I-Apple Music Festival, isimemezelo se-Apple Watch Series 2, ukuhambisana kwe-MacOS Sierra, nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto kuSoydeMac
Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (I)
Abasebenzisi abahlakaniphile kakhulu ababhoboza i-iPhone 7, ngani?